Izindaba - Indlela Yokulungisa Nokuvimbela Ukushunqulwa Kwamakhandlela
Ukuthunga amakhandlela kuyisimo sokuncibilika kwekhandlela phakathi nendawo ngaphandle kokuncibilikisa yonke ingcina ezungezile, kushiye ingcina eqinile emaphethelweni esitsha. Ilangabi elikwintambo lidala “umhubhe” ome mpo obheke phansi njengoba uvutha, ushiye ingcina eningi emaceleni.
Ngenhlanhla, kukhona amaqhinga ambalwa ongawasebenzisa ukulungisa noma yimaphi amakhandlela ashunqiselwe, kodwa umuthi ongcono kakhulu ukuvikela!
Uma ushiya ikhandlela elizihambela ngokwalo, ngezinye izikhathi lizolungisa futhi lincibilikise ingcina esele, kodwa isikhathi esiningi alikwenzi, likushiye nendandatho ehlala njalo yengcina eqinile ezungeza umjikelezo wesitsha.
Udinga ukuthatha isinyathelo ngokushesha ukuze ugweme ukuchitha noma iyiphi ingcina! Uma ulinda isikhathi eside, kuba nzima kakhulu ukulungisa.
Uma ikhandlela liqhubeka nokudonsa:
l Ingase iyeke ukuvutha ngokwayo uma iphelelwa umoya-mpilo noma i-wax ezungezile incibilika bese iminza ilangabi noma,
l Izoqeda ukushisa, kodwa ngaphandle kokudla yonke i-wax okuholela ekushiseni okufushane kakhulu kwekhandlela.
Indlela elula yokumisa umhubhe uwukunqanda ukuthi kungenzeki kwasekuqaleni, kodwa kuyenzeka ukulungise uma uphuma esandleni.
Kulo mhlahlandlela uzofunda:
Yini ebangela umhubhe
Ungakuvimbela kanjani umhubhe kusukela ekuqaleni
Ungalungisa kanjani umhubhe emakhandleleni akho owathandayo
Yini ebangela umhubhe wekhandlela?
Kulula ukubona umhubhe wekhandlela ngenxa yesici “sonqenqema” olusishiya ngemuva.
Kunezigebengu ezimbili eziyinhloko zokudonsa amakhandlela.
Ukuze siqonde inkumbulo ye-wax kudingeka sikhulume ngalokho okwenzeka phakathi nomjikelezo wokuphila wekhandlela. Lapho i-wax yekhandlela incibilika, iba uketshezi.
Kodwa lapho iphola iphinde ibe yinto eqinile, ayibi “nzima” njengoba yayinjalo ngaphambi kokukhanyisa intambo. Ngokuya ngengcina, kungathatha izinsuku ezimbalwa noma ngisho amasonto amabili ngaphambi kokuthi “iqine” njengoba kwakunjalo ngaphambi kokuba ulayite intambo.
Lokhu kusho ukuthi ingcina esanda kuncibilika ithambile, futhi ithatha ukushisa okuncane ukuphinde incibilike ibe uketshezi futhi.
Uma ukhanyisa kabusha i-wick, indawo encibilike ngaphambili izoncibilika kuqala, futhi isheshe kakhulu kune-wax yonke.
Inkumbulo ye-wax iyindawo yekhandlela elincibilika ngokushesha kakhulu kunelo lonke ikhandlela ngoba alikapholi libuyise ubulukhuni bokuqala.
Uma ungalivumeli ikhandlela isikhathi esanele sokuncibilika okwengeziwe kwendandatho yangaphandle ye-wax, futhi wandise inkumbulo yayo, intambo izoqala ukushona phansi kuze kube yilapho ilangabi lingakwazi ukuncibilikisa indandatho yangaphandle nhlobo (ngoba ukushisa phansi kakhulu). Ikhandlela lizolokhu lincibilika ingxenye ethambile ye-wax kuze kube yilapho iphelelwa umoya-mpilo noma ifika phansi kuyilapho ishiya ingcina enkulu yengcina engancibilikisiwe embizeni yakho.
Ukudonsa amakhandlela kumemori ye-wax kubangelwa ukuziphatha okungalungile komnikazi wekhandlela.
Abenzi bamakhandlela bayazi ukuthi ukukhetha intambo efanele kuyisici esibucayi kakhulu somklamo wekhandlela.
Konke okunye ekhandlelani kungaduma, kodwa uma i-wick ingeyena usayizi ofanele ngeke kube nandaba.
Inkumbulo ye-wax ivimba intambo ekubeni nethuba lokuncibilikisa i-wax yangaphandle, kodwa usayizi wentambo embi yenza kungenzeki.
Uma iwikhi yekhandlela iyincane kakhulu ayikwazi ukukhiqiza ukushisa okwanele ukuncibilikisa indawo enkulu eyanele ye-wax. Kulesi simo izosha iye phansi embobeni ebanzi njengoba intambo ikwazi ukuncibilika.
Amakamelo abandayo ngempela akwenza kube nzima ukuncibilikisa inani elifanele le-wax. Isibonelo, uma ushise ikhandlela ngaphandle ngesikhathi sasebusika uzothola ukuthi cishe yonke imigudu yekhandlela eyodwa. Lokhu kungenxa yokuthi i-wax eqinile idinga ukukhushulwa ifike endaweni yayo yokuncibilika okuthatha isikhathi eside nakakhulu uma iphumule ekamelweni elibandayo.
Ayikho enye indawo yokuba nosayizi wentambo engalungile ekhandleleni.Ukushuna kwekhandlela kusuka ekusingeni kwentambo okungafanele kubangelwa ukuklanywa kabi kwekhandlela.
Ungakuvimbela kanjani umhubhe ukuthi ungenzeki
Kunamasu amathathu ayinhloko okuvimbela umhubhe ukuthi ungenzeki.
Eyokuqala isebenza emakhandleleni avamile, kanti eyesibili ingeyabenzi bamakhandlela abazama ukuklama ikhandlela elingenawo umhubhe.
1. Shisa ikhandlela okungenani amahora amathathu
Akuwona umthetho onzima futhi osheshayo, kodwa ufuna ukuqinisekisa ukuthi ikhandlela linesikhathi sokuqala ukuncibilika. Uma isha ijule kakhulu ngaphambi kokuncibilika noma yini enye, ilangabi ngeke libe nethuba lokuncibilikisa kahle indawo futhi lizoba yinkinga.
Izinto ziyenzeka futhi ngezinye izikhathi ukhanyisa ikhandlela ukuze ubone ukuthi kufanele ulicime ngokushesha. Kulungile. Kodwa qiniseka ukuthi unikeza ikhandlela ithuba lokushisa okungenani amahora angu-3 kuya kwangu-4 "kuseshini" yokuqala yokuqala. Uma ungakuvumeli ukuthi kushise isikhathi eside ngokwanele, inkumbulo ye-wax izohlala incane futhi ikhandlela lakho cishe lizoqala ukuthuna.
2. Sebenzisa usayizi wewikhi ofanele
Enye imbangela eyinhloko yomhubhe usayizi wentambo ongafanele.
Uma ungumenzi wamakhandlela, qiniseka ukuthi uhlola amakhandlela akho ukuze ukhethe usayizi wewikhi olungile nochungechunge lwe-wax nesiqukathi sakho. Akekho othanda ikhandlela elihlanyayo. Uma umklamo wakho wekhandlela udonsa, vele ukhulise usayizi we-wick yakho elandelayo. Lokhu kuvame ukubhekana nezinkinga ze-wick ezincane. Futhi ungakhohlwa ukushisa test.
Ungalungisa kanjani umhubhe emakhandlelani akho owathandayo
Ngaphambi kokwenza noma yini qiniseka ukuthi umhubhe yinkinga yangempela. Amanye amakhandlela abukeka sengathi ahubhukile empeleni aphethwe yimigodi.
ikhandlela elibukeka sengathi lishunqiwe kodwa linezinkinga ze-crater
Ungakwazi ukubona ukuthi inkinga isuka ku-CRATERS hhayi UKUHLANGANISA uma kwenzeka izinto ezimbili:
l Intambo ishesha imigudu emizuzwini embalwa
l Ububanzi (ububanzi) bendawo encibilikisiwe buncane kakhulu
Uma kunjalo, sebenzisa izinyathelo “Zokuhubhela kanzima” ezichazwe ngezansi ukuze ulungise ikhandlela lakho.
Uma umhubhe kuyinkinga yangempela, ungasebenzisa noma iyiphi kulezi zindlela ezilandelayo ukuyilungisa, iyalwe ngobunzima nokuqina komhubhe.
Ukuthuna kancane: shisa ikhandlela isikhathi eside
Uma ikhandlela lingasebenzi kahle, lingase lizilungise ngokwalo uma unikeza ikhandlela isikhathi esanele sokuvutha.
Ngokweqile, ikhandlela eliklanywe kahle ekugcineni lizoncibilika, noma "lihlanze" yonke i-wax ezinhlangothini. Uma ikhandlela lakho libonisa uphawu oluncane lokuthunela, kufanelekile ukuliyeka lishise isikhathi eside ukuze ubone ukuthi liyavutha yini.
Ikhambi? Shisa ikhandlela amahora angu-3-4 okungenani kabili.
Uma lokho kungasizi, dlulela esinyathelweni esilandelayo.
Umhubhe ojwayelekile: beka i-tinfoil emaphethelweni bese uyeke ukuthi ishise amahora ambalwa
Uma ikhandlela lakho linewikhi yosayizi olungile kodwa ugcine ususebenza ngomhubhe ngenxa yokuthi awuzange ushise isikhathi eside ngokwanele sekuyisikhathi sokudlulela kokuningi… iziqondiso ezinonya.
Esikhathini esingeside kakhulu esidlule, i-inthanethi yethule i-viral Hack yokubhekana nemigudu yekhandlela edinga kuphela i-foil yethayela kanye nesikhathi esengeziwe.
Ithiyori ithi, ungakwazi ukuncibilikisa “ishelufu” lengcina ngokushisa kwekhandlela ngokuqondisa kabusha lokho kushisa BUYELA ku-wax esikhundleni sokuphuma esitsheni usebenzisa i-tinfoil!
NGAPHAMBI kokukhanyisa ikhandlela, nquma intambo ukuze ususe noma yimaphi amakhowe phansi afike ku-1/4″ ukuphakama.
Vala phezulu kwekhandlela nge-tinfoil (i-aluminium foil).
Sika imbobo phezulu cishe ngo-1" ububanzi, noma incane ngokwanele ukuthi i-tinfoil ihlale ngaphezu kweshalofu le-wax.
Khanyisa ikhandlela ngokucophelela futhi ulivumele ukuthi lishise amahora angu-3-4.
Lapho ukushiswa sekuphelile, umhubhe kufanele ube mncane kunangaphambili.
Ungase udinge ukuphinda lokhu izikhathi ezimbalwa ukuze ubuyisele ngokuphelele ikhandlela.
Ngaphandle kwalokho, ungancibilikisa ubuso bekhandlela phansi ngesibhamu sokushisa ukuze uphume phezulu. Lokhu akudingi i-tinfoil futhi kusebenza ngokushesha okukhulu.
Ububi? Abantu abaningi abanaso isibhamu sokushisa.
Uma usebenzise i-tinfoil noma isibhamu sokushisa futhi umhubhe uqhubeka, noma i-wick ivaliwe, qhubekela kunketho elandelayo.
Umhubhe onzima: ukushintshwa kwentambo
Uma intambo yakho yentambo igwinywe ku-wax, noma intambo yinde kakhulu ukuthi ingalungiswa usebenzisa noma yiziphi izindlela zangaphambili, okuwukuphela kwendlela ongakhetha ngayo ukufaka esikhundleni sentambo ngokuphelele.
Lokhu kuhlinzwa kufana nokuhlinzwa kwekhandlela futhi kuza nengozi yokwehluleka. Okunye ikhandlela elichithiwe, ngakho ngokuvamile kuwufanele ubungozi!
Qoqa okulandelayo ngaphambi kokuqala:
l Intambo entsha
l Ihhavini (noma isibhamu sokushisa, njengoba kukhonjisiwe).
l I-Apple coreer
Ungakwazi ukuthenga ama-wicks esitolo sakho sasendaweni sokuzilibazisa, nakuba singekho isiqinisekiso sokuthi azoba usayizi ofanele wekhandlela lakho. Izikhonkwane ze-apula zitholakala kalula. Izitolo eziningi zokudla nazo ziyawaphatha.
1. Phusha umgogodla we-apula ku-wax uzungeze intambo
beka i-apula coreer ngaphandle kwentambo
2. Sonta i-apula corer bese udonsa ngokucophelela phezulu kuze kube yilapho ipulaki ye-wax iphuma nentambo
sonta i-apula corer eduze kwe-wick, susa ipulaki ye-wax, Uma i-wick isanamathele phansi kwekhandlela lekhandlela, sebenzisa ipuleti lekhala lenaliti ukuze ukhiphe ithebhu ye-wick kanye ne-wick. Lahla intambo endala. Gcina i-wax eningi ngangokunokwenzeka,
3. Beka i-wax emuva endaweni engenalutho yekhandlela
lahla intambo futhi ubuthe ingcina esele
buyisela ingcina endaweni engenalutho yekhandlela
Ungakhathazeki ngokuthi lokhu kungenasici - uzovele uncibilikise yonke ingcina futhi noma kunjalo.
4. Ngesibhamu sokushisa, ncibilikisa ubuso bekhandlela kuze kube yilapho yonke indawo imanzi futhi ibonakala iyisicaba
sebenzisa isibhamu sokushisa noma ihhavini ukuze uncibilikise i-wax
sebenzisa isibhamu sokushisa ukuze ugcine i-wax encibilika
Ncibilikisa ingcina kuze kube yilapho ungqimba olungaphezulu seluwuketshezi
Ngaphandle kwalokho, beka isitsha kuhhavini phansi (imvamisa cishe ku-200 ° F noma 93 ° C) imizuzu engu-20 noma kuze kube yilapho yonke indawo yekhandlela iwuketshezi futhi ibonakala iyisicaba.
5. Ngemuva kokuthi ubuso bomile, sebenzisa i-toothpick noma i-skewer ukwenza imbobo yentambo yokufaka esikhundleni.
Kungase kudingeke unqamule ithebhu yentambo uma intambo iyinde kakhulu
nqamula ithebhu yewikhi uma iwikhi entsha iyinde kakhulu, engeza iwikhi entsha ekhandlelani
Ungakhathazeki ngezikhala phakathi kwentambo nengcina. Ngemva kokuba ikhandlela likhanyiswe kabusha, izindawo zizogcwala futhi nge-wax ewuketshezi ngaso leso sikhathi.
Njengoba iwikhi yakho eshintshayo ingenayo ithebhu, ingase igcine idlulele lapho ikhandlela lifika ekupheleni kwempilo yalo. Ngokujwayelekile lokhu akuthathi isikhathi esiningi empilweni yekhandlela, kodwa kungcono kunokungabe usalishisa ikhandlela futhi!
Ukuhuga amakhandlela kuyinkinga evamile futhi ngokuvamile akuthathi umzamo omkhulu ukuyilungisa. Nakuba i-wax inenkumbulo, amakhandlela aklanywe kahle ngokuvamile angalungisa inkinga kodwa ngezinye izikhathi izinto ziyenzeka futhi udinga ukuthatha isinyathelo esinqala!
Esikhundleni sokukhala noma ukulahla ikhandlela, cabanga ukwenza iphrojekthi encane yobuciko kuwo futhi uyibuyisele ngamaqhinga angenhla.
Kodwa-ke, umuthi ongcono kakhulu ukuvimbela, ngakho qiniseka ukuthi ushisa amakhandlela amasha okungenani amahora angu-3 kuya kwangu-4 ngokushisa okumbalwa kokuqala ukuze uqiniseke ukuthi i-wax iyancibilika njalo.